Safiirka Italy ee Soomaaliya oo Booqday Muqdisho • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Safiirka Italy ee Soomaaliya oo Booqday Muqdisho
Safiirka Italy ee Soomaaliya oo Booqday Muqdisho
May 15, 2010 - By: Abdirahman. A
Wefdi u hogaaminaayo Safiirka dalka Talyaaniga ee u fadhiya Soomaaliya ayaa maanta booqasho kedis ah oo aan hore loo si shaacin ku gaaray magaalada Muqdisho.
Stifano Dejak,ayaa kasoo duulay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya wuxuuna markii soo gaaray ama kasoo degay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport loo galbiyey xarunta madaxtooyada,waxaana amnigiisa si aad ah u sugaayay Ciidanka AMISOM.
Safiirka ayaa waxaa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda Dowladda Federaalka oo ay ka mid ahaayeen Madaxweyne Sheikh Shariif iyo Ra’isulwasaare Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke,waxaana uu sidoo kale booqday xarumaha Wasaaradaha ee Dowladda.
Kulanka Safiirka ula qaatay Masuuliyinta Dowladda Federaalka ayaa inta badan diirada lagu saarayay xaaladihi ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo xirrirka ka dhaxeeya labada Dowladood.
Mudo kooban ka dib ayaa Safiirka ka duulay magaalada Muqdisho isagoo dib ugu laabtay magaalada Nairobi oo ah goobti uu markii hore kasoo ambabaxay.
Wada hadaladii uula qaatay madaxda Dowladda ayaa waxaa qayb ka ahaa suragalnimada in Safaarada Talyaaniga ee Soomaaliya dib loo furo oo xiran tan iyo markii ay burburtay Dowladdi dhexe ee Soomaaliya.
Xilliga uu Safiirka booqanaayay magaalada Muqdisho ayaa wax dagaalo ah aan ka jirin iyadoo sidoo kale aysan jirin wax weeraro ah oo lagu soo qaaday xarumaha Dowladda iyo garoonka diyaaradaha oo looga bartay Xoogaga Mucaaradka in ay duqeyaan xilliyada ay ka dhoofayaan ayna kasoo degayaan masuuliyinta Dowladda Federaalka iyo madax kale oo ka socota Caalamka.
Waa Socdaalkii ugu horeeyey Safiirka Talyaaniga eee Soomaaliya uu ku tego magaalada Muqdisho.
Xuquuqda Sawirada:Radio muqdisho
Tagged With: Muqdisho